Awofo​—Monhwɛ Mo Mma | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mixe Mongolian Moore Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Awofo—Monhwɛ Mo Mma
“Ohu na hu wo nguan yiye.”—MMEB. 27:23.
Ɔkwan bɛn so na awofo te sɛ nguanhwɛfo?
Awofo bɛyɛ dɛn de nokware no adua wɔn mma mu?
Dɛn na ɛkyerɛ sɛ mmabun pii anya abusua som so mfaso?
1, 2. (a) Tete Israel no, na nguanhwɛfo adwuma ne sɛn? (b) Adɛn nti na yebetumi aka sɛ awofo te sɛ nguanhwɛfo?
TETE Israel no, na nguanhwɛfo adwuma nna fam. Awia mu oo, awɔw mu oo, wɔde wɔn nguan kɔ adidi na wɔhwɛ sɛ wɔbɛbɔ wɔn ho ban na aboa bi anaa akorɔmfo ankyere wɔn. Bio nso nguanhwɛfo no to wɔn bo ase hwɛ sɛnea nguan no biara ho te. Sɛ wohu sɛ wɔn mu bi yare anaa wapira a, wɔntenatena ho koraa; wɔhwɛ yɛ wɔn aduru. Nguammaa no titiriw na wɔma wɔn ani ku wɔn ho paa, efisɛ wɔn ho nyɛ den.—Gen. 33:13.
2 Awofo a wɔwɔ asafo no mu te sɛ nguanhwɛfo. Enti sɛnea nguanhwɛfo ma wɔn ani ku wɔn nguan ho no, saa ara na ɛsɛ sɛ awofo hwɛ wɔn mma. Ɛsɛ sɛ awofo tete wɔn mma wɔ “Yehowa nteɛso ne nyansakyerɛ mu.” (Efe. 6:4) Eyi nyɛ adwuma a ɛda fam koraa. Ɛnnɛ, baabiara a mmofra bɛfa biara sɛ́ Satan de ne nnaadaasɛm repuapua wɔn ara ni. Ɛno da nkyɛn a, mmofra no ankasa nso wɔ wɔn sintɔ. (2 Tim. 2:22; 1 Yoh. 2:16) Ɛnde, wobɛyɛ dɛn aboa wo mma? Momma yɛnhwɛ nneɛma mmiɛnsa bi a awofo betumi ayɛ de ahwɛ wɔn mma: (1) hu wɔn yiye, (2) kyerɛkyerɛ wɔn, (3) ma wɔn akwankyerɛ.
3. Awofo bɛyɛ dɛn ahu wɔn mma yiye?
3 Oguanhwɛfo pa biara gye bere hwehwɛ ne guan biara ho hwɛ sɛ ɔte apɔw anaa. Bible ka sɛ: “Ohu na hu wo nguan yiye.” (Mmeb. 27:23) Sɛ wowɔ mma a, ɛsɛ sɛ ‘wuhu wɔn yiye.’ Mmofra no rekɔ a wɔreba nyinaa, ɛsɛ sɛ wode w’ani to fam hwɛ wɔn nneyɛe na wuhu wɔn adwene ne wɔn nsusuwii. Wobɛyɛ dɛn ayɛ saa? Ɛno ara ne sɛ wubegye bere ne wɔn abɔ nkɔmmɔ.
4, 5. (a) Ɔkwan bɛn na awofo betumi afa so aboa wɔn mma ma wɔaka wɔn komam asɛm? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.) (b) Dɛn na woayɛ ma ayɛ mmerɛw sɛ wo mma ne wo bɛbɔ nkɔmmɔ?
4 Awofo bi ahyɛ no nsow sɛ, sɛ wɔn mma du wɔn mmabun bere mu a, ɛyɛ den sɛ wɔne wɔn bɛbɔ nkɔmmɔ. Edu saa bere no a, mmabun pii mpɛ sɛ wɔn awofo hu wɔn komam asɛm. Sɛ saa na wo mma te a, dɛn na wubetumi ayɛ de aboa wɔn? Ɛnyɛ daa na ehia sɛ wokyere abofra no tena ase ne no susuw nsɛm ho anibere so. Mmom bere a moabom reyɛ biribi no, ɛyɛ hokwan a wubetumi ne no abɔ nkɔmmɔ. (Deut. 6:6, 7) Wubetumi ne wɔn atu mpase. Wubetumi nso ne wɔn adi agorɔ anaa wo ne wɔn abom ayɛ fie nnwuma bi. Sɛ wo ne wo mma bom yɛ nneɛma saa a, ɛbɛyɛ mmerɛw ama wɔn sɛ wɔbɛka wɔn komam asɛm akyerɛ wo.
5 Sɛ woyɛ eyi nyinaa na wo ba mpɛ sɛ ɔka ne komam asɛm kyerɛ wo a, dɛn na wobɛyɛ? Wubetumi asɔ biribi foforo ahwɛ. Sɛ anka wubebisa wo ba no sɛ, ‘Ɛda no kɔɔ sɛn?’ no, wubetumi aka nea wo mmom woyɛe saa da no akyerɛ no. Ebia eyi bɛma ɔno nso aka nea ɛkɔɔ so akyerɛ wo. Bio, sɛ wopɛ sɛ wuhu n’adwene wɔ biribi ho a, bisa ade no ho asɛm na mfa w’ani nsi abofra no so. Wubetumi abisa adwene a ne nnamfo wɔ wɔ asɛm no ho. Afei wubetumi abisa no sɛ: ‘Afotu bɛn na wode bɛma wo nnamfo?’
6. Wo mma bɛyɛ dɛn ahu sɛ wowɔ bere ma wɔn na ɛnyɛ den sɛ wɔne wo bɛbɔ nkɔmmɔ?
6 Sɛ wopɛ sɛ wo mma ne wo bɔ nkɔmmɔ a, ma wonhu sɛ wowɔ bere ma wɔn na ɛnyɛ den sɛ wɔbɛba w’anim. Sɛ daa wo mma hu sɛ wunni adagyew a wo ne wɔn bɛbɔ nkɔmmɔ a, wɔremmɛn wo mpo na wɔaka wɔn haw akyerɛ wo. Dɛn na ɛbɛkyerɛ sɛ wo mma betumi abɛn wo? Ɛnyɛ w’ano kɛkɛ na wode bɛka sɛ, “Mubetumi aba me nkyɛn bere biara.” Mmom ma wonhu sɛ, sɛ wɔbɛka wɔn asɛm kyerɛ wo a, worenkekaw mu ngu wɔn so. Bio ɛsɛ sɛ woma wohu sɛ woremmu w’ani ngu wɔn haw so. Kayla adi mfe 19, na ɔkae sɛ: “Nea ɛhaw me biara mitumi ka kyerɛ me papa. Merekasa a, ontwa m’ano na ommu me atɛn; ɔyɛ aso tie me. Afei ɔma me afotu a ɛbɛboa me.”
7. (a) Sɛ obi ne ne ba resusuw ɔbarima ne ɔbea ayɔnkofa ho a, ɛbɛyɛ dɛn na wannyɛ ade antra so? (b) Dɛn na awofo yɛ a ebetumi ama wɔn mma ateetee?
7 Nsɛm bi wɔ hɔ a ne ka yɛ ka na, nanso ɛsɛ sɛ wo ne wo mma susuw ho ara. Emu bi ne ɔbarima ne ɔbea ayɔnkofa a ebetumi akowie aware mu. Sɛ wo ne wo ba reka asɛm a ɛte saa a, hwɛ na woamma ne nyinaa ankɔyɛ, ‘hwɛ yiye oo, hwɛ yiye oo.’ Mmom kyerɛ no ɔkwampa a ɔbɛfa so adi tebea a ɛte saa ho dwuma. Mfatoho bi ni: Fa no sɛ woakɔ baabi rekɔdidi, na wuduu hɔ no, wuhui sɛ wɔakyerɛw aduan biara ho sɛ, ‘Hwɛ yiye na woanni aduan bɔne!’ Ebia nea wobɛyɛ ara ne sɛ wubefi hɔ akɔ baabi foforo. Wo nso sɛ wo mma ba wo nkyɛn na daa nea woyɛ ara ne sɛ wobɛbɔ wɔn kɔkɔ a, ebia ɛbɛyɛ wɔn ahi na wɔremmegye afotu bio. (Monkenkan Kolosefo 3:21.) Enti nyɛ ade ntra so. Onuawa kumaa bi a yɛfrɛ no Emily kae sɛ: “Sɛ m’awofo ne me reka biribi fa mmarima ayɔnkofa ho a, wɔnka no huhuuhu te sɛ ade bi a yɛmmɔ so. Wɔma mihu sɛ, sɛ wuhu obi yiye na akyiri yi woware no a, ɛyɛ anika paa. Eyi nti ɛnyɛ den mma me sɛ me ne wɔn bɛbɔ nsɛm saa ho nkɔmmɔ. Enti sɛ me ne barima bi fa adamfo a, ɛnyɛ ade a mede besie wɔn.”
8, 9. (a) Sɛ awofo nya abotare tie wɔn mma a, dɛn na ebefi mu aba? (b) Wo ba de asɛm bi aba w’anim ma woanya abotare atie no pɛn? Adepa bɛn na efii mu bae?
8 Nya wo mma ho abotare na yɛ aso tie wɔn. Woyɛ saa a, ɛrenyɛ den sɛ wɔbɛba wo nkyɛn ne wo abɛbɔ nkɔmmɔ. (Monkenkan Yakobo 1:19.) Ɔbaatankoro bi a ɔde Katia kae sɛ: “Kan no na minni me babea ho koma koraa. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔka biribi a, memma n’ano nsi na matwa so. Ɛtɔ da a na mabrɛ, enti mempɛ sɛ obetuatua m’aso. Ɛtɔ da nso a na meredwen me ho, na edu saa bere no a, mempɛ sɛ obiara bɛhaw me. Seesei masesa koraa, na me ba no nso asesa. Ɛnyɛ den mma no sɛ ɔbɛka ne haw akyerɛ me.”
Yɛ aso tie na woahu wɔn yiye (Hwɛ nkyekyɛm 3-9)
9 Onua bi a yɛfrɛ no Ronald nyaa suahu a ɛte saa. Ɔwɔ babea bi, na da bi abaayewa no ka kyerɛɛ no sɛ n’ani gye aberante bi ho wɔ ne sukuu mu. Ronald kae sɛ: “Bere a ɔkaa saa kyerɛɛ me no, mfiase no me bo fuwii papa. Nanso misusuw asɛm no ho na mihui sɛ Yehowa wɔ n’asomfo ho abotare na ɔte wɔn ase. Afei mihui sɛ ɛsɛ sɛ mema me ba no kwan ma ɔka nea ɛwɔ ne komam na mahu nea mɛyɛ de aboa no. Ɛyɛ me dɛ sɛ meyɛɛ saa! Ɛno ne bere a edi kan a mihuu nea ɛwɔ ne komam. Bere a n’ano sii no, na ɛnyɛ den sɛ me ne no bɛkasa odwo so. Anigyesɛm ne sɛ otiee afotu no guu aso pa mu, na ɔkae sɛ ɔbɛsesa n’akwan.” Sɛ wotaa ne wo mma bɔ nkɔmmɔ a, ɛma wuhu nea ɛwɔ wɔn adwene ne wɔn koma mu. Ɛba saa a, wɔrensian wo ho nsi gyinae biara. *
KYERƐKYERƐ WO MMA
10, 11. Wobɛyɛ dɛn aboa wo mma ma wɔatena nokware no mu?
10 Oguanhwɛfo pa nim sɛ wamma n’ani ankɔ ne nguan ho a, wɔbɛfom kwan. Ebia oguan baako bi bɛtew ne ho akɔ nkyɛn baabi akɔwe nwura. Afei nkakrankakra wobɛhwɛ na watew ne ho afi nguankuw no ho koraa. Biribi a ɛte saa betumi ato mmofra. Sɛ awofo amma wɔn ani ankɔ wɔn mma ho a, nkakrankakra ebia fekubɔne anaa anigyede a ɛmfata bɛtwe wɔn afi nokware no mu. (Mmeb. 13:20) Wobɛyɛ dɛn aboa wo mma na asiane a ɛte saa anto wɔn?
11 Sɛ wo ne wo mma wɔ hɔ na wuhu sɛ wɔwɔ mmerɛwyɛ bi a, bɔ mmɔden boa wɔn ntɛm ara. Afei ma wonhu su pa a wɔwɔ na hyɛ wɔn nkuran ma wonkura mu denneennen. (2 Pet. 1:5-8) Ɔkwan baako a wobɛfa so ayɛ saa ne abusua som. Ɛyɛ hokwan a wubetumi de akyerɛkyerɛ wɔn nneɛma pii. October 2008 Ahenni Som no kae sɛ: “Wɔhyɛ mmusua ti nkuran sɛ wonni wɔn asɛyɛde a Yehowa de ahyɛ wɔn nsa no ho dwuma yiye na ama wɔatumi ayɛ abusua Bible adesua a etu mpɔn bere nyinaa.” Wode saa bere yi reboa wo mma ma wɔn gyidi ayɛ den? Nya awerɛhyem sɛ wo mma ani sɔ mmɔden a worebɔ sɛ wobɛboa wɔn no.—Mat. 5:3; Filip. 1:10.
Kyerɛkyerɛ wɔn yiye (Hwɛ nkyekyɛm 10-12)
12. (a) Sɛ abusua som kɔ so daa a, ɛboa mmabun sɛn? (Hwɛ adaka a wɔato din “ Wɔn Ani Sɔ.”) (b) Ɔkwan bɛn so na abusua som aboa wo?
12 Ababaa bi a ɔde Carissa ne n’abusua anya nneɛma pii afi abusua som mu. Ɔkae sɛ: “Nea ɛyɛ me anika paa ne sɛ yɛn nyinaa te faako rebɔ nkɔmmɔ. Daa ɛma yɛn ntam yɛ kama na yenya biribi a ɛyɛ anigye a yɛbɛkae. Me papa mfa abusua som nni agorɔ koraa; daa ɔhwɛ sɛ yɛbɛyɛ. Eyi aka me koma yiye, na mihu sɛ ɛsɛ sɛ me nso mefa no aniberesɛm. Nokwasɛm ni, mibu me papa sɛ m’agya ne abusua ti a ɔntoto n’asɛyɛde ase.” Ababaa bi a ne din de Brittney kae sɛ: “Abusua som aka me abɛn m’awofo paa. Ɛma mihu sɛ wodwen me ho na wɔpɛ sɛ wohu ɔhaw a merefa mu. Aboa ama yɛn abusua no ayɛ den na baakoyɛ wɔ mu.” Awofo asɛde paa ne sɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn mma ma wɔadɔ Yehowa. Ɔkwan titiriw baako a wɔbɛfa so ayɛ saa ne abusua som. *
MA WO MMA AKWANKYERƐ
13. Dɛn na ɛbɛka wo ba ma wasom Yehowa?
13 Oguanhwɛfo pa biara de abaa ka ne nguan ma wohu baabi a wɔbɛfa, na ɔde bɔ wɔn ho ban nso. Ne botae titiriw ne sɛ ɔbɛma nguan no anya “baabi pa adidi.” (Hes. 34:13, 14) Sɛ wowɔ mma a, wo nso wowɔ asɛyɛde koro no ara. Wopɛ sɛ wokyerɛ wo mma kwan ma wɔsom Yehowa. Bio, wopɛ sɛ wo mma tumi ka nea odwontofo no kae yi bi: “Nea mepɛ ne sɛ mɛyɛ w’apɛde, O me Nyankopɔn, na wo mmara wɔ me koma mu.” (Dw. 40:8) Sɛ wo mma tumi ka biribi a ɛte saa a, ɛnyɛ den sɛ wobehyira wɔn nkwa so ama Yehowa na wɔabɔ asu. Nanso sɛnea yenim no, sɛ wobetumi asi saa gyinae yi a, ɛsɛ sɛ wotumi te nneɛma ase na ɛka wɔn koma paa sɛ wɔbɛsom Yehowa.
14, 15. (a) Botae titiriw bɛn na esi awofo ani so? (b) Sɛ aberante anaa ababaa bi adwene nsi no pi wɔ nokware no ho a, ebia na efi dɛn?
14 Nanso ebia wo mma nyɛ biribiara a ɛkyerɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔfa Yehowa adamfo. Ebia wonnye ntom mpo sɛ nea Yehowa Adansefo gye di no ne nokware no. Sɛ saa a, dɛn na wobɛyɛ? To wo bo ase ne wɔn nsusuw nsɛm ho na fa Yehowa ho dɔ dua wɔn komam. Kyerɛkyerɛ wɔn ma wonhu nea Yehowa ayɛ ama yɛn na wɔnkyerɛ ho anisɔ. (Adi. 4:11) Afei bere a ɛsɛ mu no, wɔn ara betumi asi gyinae sɛ wɔbɛsom Yehowa.
15 Sɛ wo mma adwene nsi wɔn pi sɛ nea worekyerɛkyerɛ wɔn ne nokware no a, nya abotare na boa wɔn nkakrankakra. Ma wonhu sɛ ade a ɛsom bo paa wɔ asetenam ne sɛ wɔbɛsom Yehowa. Eyi na ɛbɛma wɔn ani agye daa. Afei bɔ mmɔden hu nea enti a wɔn adwene nsi wɔn pi wɔ nokware no ho. Ebia nsɛmmisa yi betumi aboa wo ma woahu wo ba no haw: ‘Nea Bible ka na onnye nni, anaa osuro sɛ obedi ne mfɛfo adanse? Wo ba no nnye ntom sɛ Onyankopɔn mmara bɛboa no, anaa ɛyɛ no sɛ obiara apo no ma wayɛ ankonam?’
Kyerɛ wɔn kwan a wɔmfa so (Hwɛ nkyekyɛm 13-18)
16, 17. Ɔkwan bɛn so na awofo betumi aboa wɔn mma ma wɔn ankasa ne Yehowa afa adamfo?
16 Ɛnde, sɛ wo mma adwene yɛ wɔn nãã wɔ nokware no ho a, wobɛyɛ dɛn aboa wɔn? Biribi wɔ hɔ a aboa awofo pii. Ɛyɛ a wobisa wɔn mma sɛ: “Ɛyɛ den ma wo sɛ wobɛyɛ Kristoni anaa ɛyɛ mmerɛw? Mfaso bɛn na ɛwɔ so sɛ obi bɛyɛ Kristoni? Sɛ wubetumi asom Yehowa a, nneɛma bɛn na ɛsɛ sɛ wode bɔ afɔre? Wunnye ntom sɛ nhyira a yenya nnɛ ne nea yebenya daakye no som bo sen biribiara a yɛde bɔ afɔre?” Wo ara fa wo nsɛm nwene nsɛmmisa a ɛte saa ma ɛnyɛ anika. Mmisa wo ba no nsɛm te sɛ nea ogyina kɔɔto. Mmom to wo bo ase ma onhu sɛ wodɔ no. Bere a morebɔ nkɔmmɔ no, wubetumi ne no asusuw Marko 10:29, 30 ho. Ebia abofra no bɛkyerɛkyerɛw nhyira a ɛwɔ Kristosom mu na wasan akyerɛw nea ɛma ɛyɛ den sɛ obi bɛyɛ Kristoni. Eyi bɛboa wo ma woahu ɔhaw a wo ba no refa mu na woahu nea wobɛyɛ aboa no. Yɛne nnipa pii sua Bible Kyerɛkyerɛ ne “Onyankopɔn Dɔ” nhoma no. Sɛ yɛne wɔn a wɔkyerɛ asɛm no ho anigye no sua nhoma a ɛte saa a, yɛn ankasa mma nso ɛ? Ɛnde, wo ne wɔn resua anaa?
17 Bere a wo mma renyin no, wɔn ara na ɛsɛ sɛ wosi gyinae sɛ wɔbɛsom Yehowa anaa wɔrensom no. Nsusuw sɛ woresom Yehowa nti ɔkwan biara so wo mma nso bɛsom no. Ɛsɛ sɛ wɔn ankasa fa Yehowa adamfo. (Mmeb. 3:1, 2) Sɛ ɛyɛ den ma wo ba sɛ ɔbɛyɛ saa a, dɛn na wobɛyɛ? Boa no ma ɔmpɛɛpɛɛ ne gyidi mu, na ommisa ne ho nsɛm te sɛ: ‘Meyɛ dɛn hu sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ. Meyɛ dɛn hu sɛ Yehowa dwen me ho? Migye di paa sɛ midi Onyankopɔn mmara so a, ɛbɛboa me?’ Awofo, munsuasua nguanhwɛfo na nkakrankakra monkyerɛ mo mma ɔkwan a ɛsɛ sɛ wɔfa so. Boa wɔn ma wɔn ankasa nhu sɛ Yehowa som ne ade a ɛsom bo paa wɔ wɔn asetenam. *—Rom. 12:2.
18. Dɛn na awofo bɛyɛ de asuasua Yehowa, Oguanhwɛfo Kɛseɛ no?
18 Nokware Kristofo nyinaa pɛ sɛ wosuasua Yehowa, Oguanhwɛfo Kɛseɛ no. (Efe. 5:1; 1 Pet. 2:25) Ɛsɛ sɛ awofo titiriw hu wɔn mma yiye, efisɛ wɔsom bo. Ehia sɛ awofo kyerɛkyerɛ wɔn mma sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya nhyira a Yehowa ahyɛ ho bɔ no. Ɛnde, yɛ nea wubetumi biara boa wo mma nkakrankakra na wɔmfa nokware no mmɔ wɔn bra na wɔnnɔ Yehowa!
^ nky. 9 Sɛ wopɛ eyi ho nsɛm pii a, hwɛ August 1, 2008, Ɔwɛn-Aban, kratafa 10-12.
^ nky. 12 Sɛ wopɛ eyi ho nsɛm pii a, hwɛ asɛm a wɔato din, “Abusua Som—Ɛho Hia Ma Nkwagye!” wɔ October 15, 2009, Ɔwɛn-Aban, kratafa 29-31.
^ nky. 17 Sɛ wopɛ eyi ho nsɛm pii a, hwɛ February 1, 2012, Ɔwɛn-Aban, kratafa 18-21.
WƆN ANI SƆ
Momma yɛnhwɛ nsɛm a anuanom mmabaa mmienu bi ka de kyerɛɛ mfaso a wɔanya afi abusua som mu.
“Abusua som boa ma woka bɛn w’abusua ne Yehowa. Ɛboa ma wuhu sɛnea wote ankasa ne nkɔso a worenya wɔ Yehowa som mu. Ɛma wuhu nneɛma a wotɔ mu sin ne nsakrae a ɛsɛ sɛ woyɛ.”
“Abusua som ma yenya hokwan kyerɛ yɛn adwene a ehu biara nnim. Saa bere no yɛde asetenam dadwen biara to nkyɛn na yɛde yɛn adwene si honhom fam nneɛma so. Kan no na yɛnyɛ biribi a ɛte saa, nanso seesei yɛyɛ. Ɛyɛ nhyira kɛse paa!”